युरोपियन निर्देशहरूले सदस्य राष्ट्रहरूले यूबीओ-रेजिष्टर सेट अप गर्न आवश्यक पर्दछ। UBO लाई परम लाभकारी मालिक हो। युबीओ रेजिस्टर २०२० मा नेदरल्याण्ड्समा स्थापना हुनेछ। यसले २०२० देखि कम्पनीहरू र कानूनी संस्थाहरूलाई उनीहरू (भित्र) प्रत्यक्ष मालिकहरू दर्ता गर्न बाध्य पार्दछ। UBO को व्यक्तिगत डेटाको अंश, जस्तै नाम र आर्थिक रुचि,… थप पढ्नुहोस्
मृत्यु वा दुर्घटनाको कारणले गैर-भौतिक क्षतिहरूको कुनै क्षतिपूर्ति हालसम्म डच नागरिक कानून द्वारा समेटिएको थिएन। यी गैर-भौतिक क्षतिले नजिकका आफन्तहरूको शोक समावेश गर्दछ जुन मृत्युको घटना वा उनीहरूको प्रियजनको दुर्घटनाको कारण हुन्छ जसको लागि अर्को पार्टी जिम्मेवार ठहरिन्छ। यस प्रकारको क्षतिपूर्ति ... थप पढ्नुहोस्
उद्यमीहरू जसले कामदारहरूलाई काममा लिन्छन्, तिनीहरू प्रायः गोप्य जानकारी साझा गर्दछन् यी कर्मचारीहरूसँग। यसले प्राविधिक जानकारीलाई चिन्तित गर्न सक्छ, जस्तै एक नुस्खा वा एल्गोरिथ्म, वा गैर-तकनीकी जानकारी, जस्तै ग्राहक आधारहरू, मार्केटिंग रणनीति वा व्यापार योजनाहरू। जे होस्, यस जानकारीलाई के हुन्छ जब तपाईंको कर्मचारीले प्रतियोगीको कम्पनीमा काम गर्न शुरू गर्दछ? के तपाइँ यस जानकारी लाई सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ? धेरै केसहरूमा, ... थप पढ्नुहोस्